Waqtiga ugu wanaagsan ee la xiiro | Ragga Stylish
Ragga ugu badan, xiirashada waa hawl maalmeed u noqda mid ka mid ah howlaha ugu dhibka badan. Xalku ma aha in gadhka la beero, laakiin waa in la isku dayaa in si sax ah loo xiirto si looga fogaado raaxo la'aanta xiirashada xun: cuncun, googoyn, cuncun ...
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kuu damaanad qaada a xiirid qumman ayaa dooranaya waqtiga ugu fiican ee maalinta in la xiiro. Inkasta oo ragga intiisa badani ay xiirto waxa ugu horreeya subaxa hore, waqtiga ugu fiican waa ka hor intaadan seexan. Adoo xiiraya habeenkii, waxaad siineysaa maqaarkaaga waqti aad dib ugu cusbooneysiiso ka hor intaadan dibadda u bixin, kana hortageyso maqaarka cuncun leh inuu u soo gaaro qabow, kuleyl ama dabeyl.
Taladani waxay kaa caawin doontaa inaad daryeesho maqaarkaaga, iska ilaali cuncunka si aad u muujiso midab aad u biyo badan, gaar ahaan ku habboon ragga leh gadhka adag ama maqaarka xasaasiga ah. Maxaa intaa ka badan, habeenkii waxaad haysataa waqti badan oo aad ugu heellan tahay xiirashada, si ka duwan saacadaha hore ee maalinta. Degdeggu wuxuu kuu sababi karaa inaad si liidata u xiirto, taasoo ka dhigeysa aagagga aan la xiiran, ama waxay keenaysaa dillaac iyo cuncun waqti la'aan darteed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Waqtiga ugu wanaagsan ee la xiiro